Walee Garguurte maaha ?Kabo Caseeyihii Madaxweyne ka noqdey Dalkiisana Horumariyay? | Gaaloos.com
Home » galmada » Walee Garguurte maaha ?Kabo Caseeyihii Madaxweyne ka noqdey Dalkiisana Horumariyay?
Walee Garguurte maaha ?Kabo Caseeyihii Madaxweyne ka noqdey Dalkiisana Horumariyay?
Luiz Inacio Lula Da Silva, waxa uu ahaa canugga 7-aad ee qoys sabool ah.
Qoyskiisu waxa ay ku noolaayeen Buush ama Cooshad yar oo ku taallay mid ka mid ah xaafadaha ugu saboolsan magaalaada Sao Paulo ee dalka Brazil,waxaana ku dhowaa (club) kalaab lagu tunto, oo qeylada muusigga iyo sawaxanka kuwa sarqaansan ka soo baxaya ay ka seexan waayeen.
Reerkiisa oo aad sabool u ahaa darteed, Lula Da Silva wuu dhammeysan waayay waxbarashada dugsiga hoose, waxa uuna uga tagay fasalka Shanaad, oo waxa uu ku khasbanaaday in uu shaqeeyo. Waqti aan yareyn ayuu Caseeye ka ahaa xaafadaha magaalada Sao Paulo, ka dib waxa uu ka shaqeeyay kaalin shidaal, sidoo kale wuxuu noqday Makaanik baabuur.
Markii uu 19 sano jir ahaa ayuu ka go’ay far yareyda gacantiisa bidix, isagoo ka shaqeynayay warshad sameysa spare parts-ka baabuurta.Hooyadiis ayaa bartay sidii uu karaamo ugu noolaan lahaa.Waxa ay bartay in uu naftiisa xushmeeyo si ay dadku u ixtiraamaan,waxay bartay in aan Saboolnimadu ama faqrigu ceeb ahayn iyo in aan farxadda iyo baraaruhu ku xirneyn waqtiga iyo goobta la joogo.
Waxay kaloo bartay in aan dhaqan wanaaggu ahayn daciiftinimo, balse uu yahay awood. Waxay ku tiri hooyadii: Si kasta oo dhib laguugu geysto, xumaanta ha ku gudin xumaan ee wanaag ku baddel. Sanadkii 1980-kii waxaa shaqo joojin sameeyay shaqaalaha warshadaha, xilligaas waxaa maamulka la wareegay milateriga. Da Silva isagoo matalayay ururrada shaqaalaha warshadaha ayuu jeediyay hadallo ay dowladdu dhibsatay, waxaana xabsiga la dhigay 30 maalmood.
Sanadkii 1981-kii waxaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah, laakiin waxaa la sii daayay 1982. Saddex jeer ayuu u tartamay madaxtinimada Brazil, balse kuma guuleysan, ugu dambeyntiina waxa uu Brazil madaxweyne ka noqday Bishii January 1,deedii Sanadkii 2003-dii. Mar kale ayaa dib loo soo doortay oo waxa uu xilka hayay ilaa Bishii January 1,deedii Sanadkii 2011,kii. Da Silva waxa uu maamulayay dhaqaalaha iyo khayraadka Brazil, isaga ayaana lagu aamminay 8 sano oo xiriir ah.Markii ay dhammaatay muddadii maamulkiisu ku ekaana, waxa uu diiday in dustuurka wax laga baddelo, inkastoo 80% dadka reer Braizil ay ka soo hor jeedeen in uu xilka ka dego. Dhowr bilood ka dib markii uu xilka ka degay, saaxiibbadiis ayuu ka codsadey lacag deyn ah oo uu ku dayac tirto guri uu ku leeyahay baadiyaha Sao Paulo.
Intii uu dalka Brazil xukumayay Da Silva waxa uu dadkiisa ku maamulay si daah-furnaan ah oo musuq-maasuq ka maran, sidaas ayuuna ku helay kalsoonida shacabkiisa. Waxa uu Brazil ka dhigay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha xooggan dunida, waxa uuna ku guuleystay in uu bixiyo dhammaan deymihii Bankiga lacagta adduunku ku lahaa Brazil, labo sano ka hor xilligii loo qabtay.
Afartii sano ee xukunkiisa ugu horreysay waxa uu dadaalkiisa isugu geeyay in uu Brazil ka xoreeyo deymahii dibadda looga lahaa, si buuxda ayuuna ugu guuleystay arrintaas. Afartii sano ee maamulkiisa ugu dambeysayna Da Silva waxa uu ku dadaalay dedejinta horumarinta dalka, isagoo shaqooyin u abuuray in ka badan 20 Milyan oo reer Brazil ah. Waxa uu dagaal xooggan ku qaaday saboolnimada oo uu horay u soo tijaabiyay, waxa uuna Da Silva muteystay naaneesta ah " Hoggaamiyaha Fuqarada”.
Maalintii uu qasriga ka baxayay Lula Da Silva aad ayuu u ilmeeyay,umana ooyin kursiga uu ka tagayo dartii, ee waxaa qalbigiisa saameeyn weyn ku yeeshay taageerada iyo jaceylka xad dhaafka ah ee ay shacabkiisu u hayaan. Malaayiin reer Brazil ah ayaa maalinkaas soo bannaan baxay, iyagoo muujinayay sida ay ugu dheggan yihiin Da Silva, iyagoo dalbanayay in waqtiga loo kordhiyo, uuna dalka sii maamulo, xitaa haddii taasi keeneyso in dustuurka wax laga baddelo.
Laakiin Da Silva wuu ku gacan seyray codsigaas, sidaas ayuuna ku sagootiyay shacabkiisa isagoo ilmeynaya, ka dib markii uu Brazil ka dhigay dal xooggan dhaqaale ahaan oo xasilloon siyaasad ahaan. Wuxuu yiri markii uu kursiga ka degayay "Waxaan ka degayaa madaxtinimada, laakiin ha u qaadanina in aan idinka tagey, Waxaan joogi doonaa jidadka dalkan, si aan qeyb uga qaato xallinta dhibaatooyinka Brazil”
Madaxweyne Obama oo wax laga weydiiyay Da Silvana waxa uu yiri " Waa siyaasiga ugu caansan dunida guudkeeda”
Qalinkii: Liibaan Cabdi Cali.
Title: Walee Garguurte maaha ?Kabo Caseeyihii Madaxweyne ka noqdey Dalkiisana Horumariyay?